Newsoftwares USB Block 1.5.5 ( 11Mb ) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
poweramp music playerဆော့ဖ်ဝဲ။
Newsoftwares USB Block 1.5.5 ( 11Mb )
Posted on November 9, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
မိမိကွန်ပြူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ Data တွေကို သူများခိုးမှာပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ USB Drives, External Drives, CDs/DVDs စသည်တို့အပြင် မိမိကွန်ပြူတာထဲမှာရှိသမျှ System တွေအကုန်လုံးကို Password ပေးပြီး
ပိတ်လို့ရပါတယ်။ Name မှာမိမိကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်ပါ။ Password ကိုလည်းထည့်ပြီးရင်မှတ်ထားပါ။
ပြန်ပြီး Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ ထည့်ထားတဲ့ Password ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်။ All Windows 32-bit and 64-bit အကုန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အထဲမှာ Crack ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ Crack ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ရင်အထဲမှာ Serial ကီးရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်လုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးပါ။
အောက်မှဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်ပါနော်.. ဒေါင်းပြီးရင်စိတ်ကြိုက်ကလိကြတော့ ဘော်ဘော်တို့ရေ…
USB Block helps you prevent copy of your data to USB drives and CDs/DVDs that do not belong to you. It isapermission based software, once installed, the program asks you to set and confirmapassword which it uses to allow access to your own USB drives, External drives, CDs, DVDs etc., while blocking every other drive. This prevents illegal copy, leakage and duplication of your private files and folders.
USB Block prompts forapassword every time an external device is plugged into your PC. If you enter the correct password, the program allows full access to that drive, however if you deny access, no file can be copied or leaked from your PC to that drive. The program also maintainsalist of authorized devices for you so that you won’t be prompted for the password next time. This way, you can allow access and transfer data to your own drives while continue to block others.
ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ
မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်သောဆော့စ်ဝဲများသည် Website Malware Scanner နဲ့စစ်ပြီးထားသောကြောင့်
Security report (No threats found)
အဆင်ပြေရင် ဆိုဒ်က ကြော်ငြာများကို တစ်ချက်လောက်နှိပ်သွားပါအုံးခင်ဗျာ
This entry was posted in Software, USB နှင့်ဆိုင်သော, USB Security. Bookmark the permalink.
← လက်နက် ကိရိယာ စုံတဲ့ ZDbox ( R oot Task Killer ) 4.0.408
မိမိ ရဲ့ ဖုန်း ကို My Backup Pro Apk v4.0.2 သုံးပြီးတော့ BACK UP လုပ်မယ် →